FAMPIASAANA INDRINDRA Ny fitaovana mahery vaika TestStep® Bacterial vaginosis (BV) dia mikasa handrefesana ny fivaviana ho an'ny fanampiana amin'ny famaritana ny fivaviana bakteria. FAMPIDIRANA Ny vidin'ny ph fivaviana misy asidra 3,8 ka hatramin'ny 4,5 dia fepetra takiana fototra amin'ny fiasa tsara indrindra amin'ny rafitry ny tena amin'ny fiarovana ny fivaviana. Ity rafitra ity dia afaka misoroka amin'ny fomba mahomby ny fanjanahantany amin'ny alàlan'ny pathogens sy ny fisian'ny aretina amin'ny fivaviana. Ny fiarovana voajanahary manandanja indrindra amin'ny fivaviana ...
FAMPIDIRANA Vulvovaginal candidiasis (WC) dia heverina fa iray amin'ireo antony mahazatra indrindra amin'ny soritr'aretin'ny fivaviana. Manodidina ny 75% ny vehivavy no ho voan'ny Candida farafaharatsiny indray mandeha mandritra ny androm-piainany. 40-50% amin'izy ireo no hiharan'ny areti-mifindra miverimberina ary 5% no tombanana ho voan'ny Candidiasis mitaiza. Ny Candidiasis dia matetika no diso ny mamantatra azy noho ny aretina hafa amin'ny fivaviana. Soritr'aretin'ny WC izay misy: mangidihidy maranitra, maharary fivaviana, sosotra, maimaika eo amin'ny molotra ivelany amin'ny fivaviana ...
FANAMBARANA Ny gonorea dia aretina azo avy amin'ny firaisana vokatry ny bakteria Neisseria gonorrhoeae. Ny gonorrhea dia iray amin'ireo aretina mikraoba mahazatra indrindra amin'ny areti-mifindra ary matetika mifindra mandritra ny firaisana ara-nofo, anisan'izany ny firaisana amin'ny fivaviana, am-bava ary amin'ny anal. Ny zava-maniry miteraka antony dia mety hamindra ny tenda, ka mamoaka tenda mafy. Izy io dia afaka mamindra ny nosy sy ny vongan-javaboary, mamokatra aretina antsoina hoe proctitis. Miaraka amin'ny vehivavy dia mety mamindra ny fivaviana izy io, ka miteraka fahasosorana amin'ny tatatra (...
Ny fitsapana haingana StrongStep® Chlamydia trachomatis dia immunoassay mikoriana haingana eo an-dàlam-pandrindrana ho an'ny famaritana mialoha ny antigen Chlamydia trachomatis antigen amin'ny vatan'ny vavony urethral sy vavy Tombony Azo ilaina sy haingana 15 minitra, fisorohana ny fiandrasana ny hozatra amin'ny valiny. Fitsaboana ara-potoana Ny sandan'ny vinavina mialoha ho an'ny vokatra tsara sy ny fahaiza-mamaritra manokana dia mampihena ny loza ateraky ny sezaela sy ny fandefasana bebe kokoa. Mora ampiasaina fomba iray - tsy misy fahaizana manokana na instru ...
FAMPIASAANA INDRINDRA Ny fitaovana mahery fiasa mahery an'ny StrongStep® Cryptococcal Antigen dia fanandramana haingana ny immechromatographic ho an'ny fitiliana ireo antigène polysaccharide capsule an'ny karazan-javamaniry Cryptococcus (Cryptococcus neoformans sy Cryptococcus gattii) ao anaty serum, plasma, ra manontolo ary tsiranoka hazondamosin'ny cerebral (CSF). Ny fitsapana dia fanandramana laboratoara ampiasain'ny dokotera izay afaka manampy amin'ny famaritana ny cryptococcosis. FAMPIDIRANA Cryptococcosis dia vokatry ny karazany roa amin'ny Cryptococcus species com ...
H. Pylori Ag Rapid Test dia mamantatra ny antigen, Kitapo fitsapana Igm / Iggrapid, Fitsapana haingana momba ny Coronavirus Ket, Coronavirus ho an'ny fitsapana Covid-19, Kitapo fitsapana antigona Coronavirus, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Fitsapana haingana,